Tsikera tsy am-piheverana no ataon’ny sasany ny CUA | Ny Valosoa Vaovao
Tsikera tsy am-piheverana no ataon’ny sasany ny CUA
Asa na inona no fiheveran’ny sasany ity Antananarivo ity fa atao foana ny karazana tsikera mivaralila miantefa amin’ny mpitantana ny Kaominina Antananarivo Renivohitra . Tsy misy milaza mihitsy hoe aza mitsikera satria ny tsikera dia mampandroso . Fa ny tsikera tiana resahana eto dia ilay atao tsy ampiheverana fa atosiky ny fankahalana sy fialonana miampy fahambanian-tsaina ka na ireo sokajiana miteny tsikera tsy ampiheverana aza dia toa tsy mahatsapa akory ny zavatra izay lazainy .Tokony ho tsapan’izy ireny fa raha atao ny fandaminana ny tanànan’Antananarivo sy ny fandraisana fanapahankevitra izay manaraka tsara ny lalàna dia ho tombotsoan’ny rehetra . Diso hevitra ny sasany fa raha diovina ny tanàna , alamina ny tsena , esorina ny mpivarotra amoron-dalana , atsangana ny fotodrafitr’asa toy ny etsy amin’ny Esplanade , atao hentitra kokoa ny resaka contre visite satria mikirakira fitateram-bahoaka sy ain’olona , omena aina ny fiarahamiasa amin’ny tsy miankina sy ny maro tsy voatanisa dia ho tombontsoan’ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana, na ny Tim, na izay nifidy azy izany, fa ho tombotsoan’ny rehetra izany rehetra izany ka tafiditra ao anatiny ianareo mpanenjik’aloka ireo . Ny zavatra tsy ambara ihany koa dia izao : rehefa mitsikera dia mba zavatra marim-pototra no tenenina , zavatra voamarina , zavatra voalanjalanja sy misy ventin-kevitra ary maharesy lahatra . Ny tsapa tato ho ato ny mifanohitra amin’izany no ataon’ireo olom-bitsy tsy misy atao fa manenjika ny mpitantana ny Kaominina Antananarivo Renivohitra . Efa nomena ny fanazavana fa tsy namidy amin’ny Karana izany ny Esplanade eo Analakely dia mbola mamafy lainga ihany ny sasany satria ny famafazana lainga no heveriny fa hampihemotra ny fampandrosoana ny tanànan’Antananarivo .
Efa nambara ombieny ombieny koa fa ny OMAVET dia tsy « Privée » dia mbola mitatatata ihany ny sasany fa Privée hono , tokony hanao fanadihadiana eny Nanisana ireo mpitsikera ka mba manontany hoe iza avy ny mpikambana ao amin’ny Filankevi-pitantanan’izany OMAVET izany dia inona no ifamatoran’ireo olona ireo olona ireo amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra . Tsy mihemotra amin’ny fampandrosoana an’Antananarivo ny Ben’ny Tanàna sy ny mpiara-miasa aminy satria efa nekeny teo anatrehan’Andriamanitra sy ny vahoaka izany . Sao koa adinon’ny sasany fa renivohitr’i Madagasikara Antananarivo . Mendrika fahadiovana sy firindrana ary filaminana satria raha vao miresaka hoe Madagasikara ny any ivelany dia Antananarivo no ao an-tsainy voalohany , toy ny hoe raha vao miteny hoe Frantsa dia tsy Toulouse no ao an-tsaina voalohany na Nice na Lyon fa Paris , raha vao miteny hoe Espagne dia Madrid no ao an-doha voalohany sy ny maro tsy voatanisa . Tokony hijery ny renivohitry ny firenena any ivelany any ireo mpanenjika ny mpitantana ny Kaominina Antananarivo renivohitra fa tsy hahita mpivarotra amoron-dalana ao Beijing renivohitr’i Chine izy kanefa ny isan’ny olona mifamezivezy ao Beijing isan’andro dia mitovy amin’ny isan’ny mponina eto Madagasikara . Tsy maintsy ampiharina eto Antananarivo ny fitsipim-pifehezana na ny Discipline satria tsy sahaza ny mponin’Antananarivo ny fofona masiso sy ny loto miaraka amin’ny gaboraraka . Tsy hisy fandrosoana mihitsy ao anatin’ny fiainana mitovy amin’ny ganagana misasa loha . Olombelona mendrika fandrosoana ny mponin’Antananarivo fa tsy ganagana araka izay mety hiheveran’ny tsy tia fandrosoana, sa ahoana hoy ianao ?